739 vaita kuuya neCovid muZim | Kwayedza
739 vaita kuuya neCovid muZim
17 Jul, 2020 - 08:07 2020-07-17T08:48:47+00:00 2020-07-17T08:37:06+00:00 0 Views
KUSVIKA nemusi weChipiri, Zimbabwe yange yava nevanhu 1 064 vawanikwa vaine Covid-19 mushure mekuvhenekwa uye pavanhu ava, vakawanda vavo — 739 — vakabva nechirwere ichi kunze kwenyika.
Vazhinji vevanhu vawanikwa vaine Covid-19 muno ndevanenge vadzoka vachibva kumatunhu anosanganisira kuAsia, America nemuAfrica apo South Africa neBotswana dziri idzo dzine vanhu vakawanda.
Izvi zvinoreva kuti vanhu vawanikwa vaine Covid-19 munyika muno uye vasina kumbobvira vaenda kunze vasvika 325.
Pavanhu 1 064 ava, 343 vatonaya asi vamwe 20 vakafa. Huwandu hwevanhu vafa nekuda kwechirwere ichi hwakakwira zvichitevera kufa kwemwana kuMatalebeland South uyo airapwa pane chimwe chipatara cheko.
Vachitaura kuvatori venhau nemusi weChipiri mushure memusangano wedare reCabinet, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko nenyaya dzenhepfenyuro, Senator Monica Mutsvangwa, vanoti Hurumende iri kushushikana zvikuru nekuwanda kuri kuita nyaya dzevanhu vari kubatwa neCovid-19.
Vanoti matunhu anoti Bulawayo neHarare ndiko kune vanhu vakawanda vafa nechirwere ichi.
“Bulawayo neHarare Metropolitan Provinces ndiwo matunhu ane vanhu vakawanda vafa nekuda kweCovid-19 vanove vanonwe (Bulawayo) nevasere (Harare),” vanodaro.
Sen Mutsvangwa vanoenderera mberi vachiti, “Cabinet iri kushungurudzika zvakanyanya nekuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa neCovid-19 vari munyika muno.”
Vanoti Hurumende iri kutora matanho akananga kusimbaradza zvirongwa zvekumisa kupararira kwechirwere ichi anosanganisira kuvhenekwa kwevanhu vakawanda munzvimbo dziri kuwanda vane Covid-19.
Hurumende ndiyo zvakare ichange ichiona pamusoro penyaya yekufamba kuchaita mabhazi pakati pemadhorobha, zvikuru panyaya yekutakurwa kwevanhu vanenge vachida kurapwa zvirwere.
Vakabaiwa Indian Covaxin ‘votangi...18 Oct, 2021
Vatori venhau votsigirwa18 Oct, 2021
Covid yakanganisa zvekutengeserana17 Oct, 2021
Vatori venhau votsigirwa
Covid yakanganisa zvekutengeserana
N’anga yobatsira vechidiki kuMbare
‘Ngwarirai kune vari kuba vana’
Mwana akawanikwa akafira mumvura
Vodzidziswa nezveMixed Martial Arts
MaWarriors tichiri nemukana: Mpandare
Vogadzirira kudzoka kwenetball
Chikwata chakasimba: Mapeza
Vakabaiwa Indian Covaxin ‘votangisa’
Tadzidza kubva kuCovid-19: VP
Kutora zvinodhaka, Covid nevechidiki
Ngwarirai gomarara remuzamu